Uyini umehluko phakathi kokuguqulwa kwesimo somuntu nokuziphatha okuhle? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Uyini umehluko phakathi kokuguqulwa kwesimo somuntu nokuziphatha okuhle?
Okwedlule: Iyini imisebenzi emihle? Ibonakaliswa kanjani imisebenzi emihle?
Okulandelayo: Yini ukuguquka kwesimo somuntu?